St Mary's CE Primary School - Humanities Somali translation
Humanities Somali translation
Barashada Xuquuqda Aadamaha (Taariikh + Joqoraafi)
Ujeedada aan ciyaalka St Mary’s aan ubarno Taariiqda waxa ay tahay in aan ilmaha ku dhalino xiiso ah in ay ogaadaan wixii horay u dhacay. Waxay taasi ilmaha ka baranayaan wax yaabihii iyo munaasabadihii ugu muhiimsanaa ee Taariikhda soo maray iyo waliba inay bartaan oo ay ku xamdiyaan sida ay nolasha markii hore ahayd iyo sida ay hada isu badashay.
Waxa aan ilmaha barnaa taxanaha Taariikhda si ay ufahmaan wax yaabihii dhacay waagii hore iyo sida ay ooga qayb qaateen nolasheena manta.
Caruurta waxa ay bartaan in ay qiimeeyaan dhaqankooda iyo dhaqanka dadka kale ee aduun waynaha ku nool.
Ujeedada aan ciyaalka u barno Joqoraafiga waxa ay tahay in ay bartaan oo ay fahmaan dhulalka iyo dabiicada.
Waxa oo kaloo ciyaalka aan barnaa xaafadaha ay degan yihiin, waxayna la barbar dhigaa xaafadaha kale ee wadankan Ingiriiska ku yaal iyo waliba aduunka intiisa kale. Waxaan caruurta ku dhiiro galinaa in ay aqoontooda hormariyaan.
Barashada xuquuqda aadamaha waxa ay ka mid tahay qayb ka mid ah manhajka iskuulkeena inaan caruurta barno waxbarasho balaaran isu dheelo Tirana.
Marka ay caruurta baranayaan xaquuqda aadamaha (Taariikhda + Joqoraafiga) waxa ay ka bartaan sida wax la isu waydiiyo, sida haday mushkilad dhacdo loo xaleeyo, kombuyuutarka wax barista iyo sida ay usoo gudbin lahaayeen natiijada ay gaareen iyagoo umarayo dariiqad haboon.
Waxaan caruurta wax ku barnaa dariiqada kala duwan marka ay baranayaan casharada xuquuqda aadamaha.
Waxaan is ticmaalnaa fasalka oo dhan in wax lawada baro oo ay jamaacad ku sameeyan ama aan qofqof oola shaqeeyno, kadibna labadaas ayaan isu gaynaa waxaana u isticmaalnaa dariiqad wax baaris ah.
Waxaan caruurta ku caawinaa si ay waxbarashadoodu u noqoto mid ay fahmaan ayna sameeyn karaan, waxaan siinaa macluumaad badan, qariirad, qiyaas la qiyaasay iyo waliba sawiro.
Ciyaalka waxa oo kalay ka qayb qaataan in ay wax masalaan, dooda ay ka qayb qaataan iyo waliba inay fikradaha la is dhaafsado kuwaas oo kusaabsan waxbarashada, waxayna fasalka usoo gudbiyaan wixii ay natiijo gaareen.
Waxa aan ciyaalka fursad kusiinaa in ay booqasho ugu tagaan meelaha taariikhiga ah. Waxaan kaloo casunaa oo iskuulka inoogu yimaada dad marti ah, kuwaas oo ka sheekeeya waxyaabaha taariikhiga ah iyo waxyaabihii ugu muhiim sanaa oo horay udhacay.
Waxaan iyana aan aad ugu dadaalnaa in aan ilaalino biiada, waxaana isku daynaa in aan manhajka iskuulkeena qayb ka mid ah ka dhigno. Waxaan isticmaalnaa qaybta dabiiciga ah iyo beerta Alexandra. Waxaan kaloo hormarinaynaa baaxada lagu ciyaaro. Waxaan kaloo dooranay meelo ku yaal xaafada iskuulka ku yaal oo sameeya waxyaabaha lagu jimicsado sida isboortiga iyo dabaasha kuwaas oo bixiya kuwa ugu wanaagsan ee xaafada. Waxaan isku barbar dhigaynaa Urban Manchester iyo the Children’s Farm oo ku taal Chester.
Waxaan ciyaalka fasalada Rasabshanka barnaa barashada xuquuqda aadamaha taas oo ah qayb muhiim ah oo ay ubartaan manhajka iskuulka qayb ka mid ah. Maadaama ay qaybta xanaanada caruurta ay ka mid tahay qayb ka mid ah manhajka wadanka, waxaan isku xiriirinaa shaqada ciyaalka ay qabtaan iyo tan Early Learning Goals ka ay sameeyaan, taas oo wada hoos imaanaysa manhajka loogu tala galay in la baro caruurta da’doodu udhaxayso sadex jir ilaa iyo shan jir.
Barashada adabka aadamaha waxa ay fududaysaa waxbarida waxyaabaha kale ee manhajka ka mid ah sabatuna waxay tahay mar walibaa kor ayey uqaadaa xirfadaha wax akhriska, qoraalka, ku hadalka iyo dhagaysiga.
Arbaco walibaa macalimiinta fasalada waxa ay diyaariyaan oo ay sameeyaan wax la yiraahdo qaybta ka gudbida ayna siiyaan caruurta fursad ay ay isticmaalaan wixii ay barteen iyaga oo ku samaynaya qoraal.
Ciyaalka Key Stage 1 waxa aan isticmaalnaa sheekooyin iyo jilid/masalaad. Ciyaalka Key Stage 2 waxa ay haystaan fursad ay manaaqasho kusameeyaan waxna ay ku maslaan ayna ku sameeyaan xaflada asambaliga.
Fasalada 2aad waxa ay sameeynayaan Great Fire of London, Fasalada 3aad waxa ay samaynayaa Romans Assembly, Fasalada 4aad Tudors Assembly, Fasalada 5aad Victorians Assembly, iyo ciyaalka Fasalada 6aad WWII Assembly taas oo ka mid noqotay qayb ka mid ah taariikhda Britishka ee iskuulka. Kaas oo waliba ah mid quwad leh